'मर्निङ, इभिनिङवाक'मा मास्क लगाएर दौडिनु ठीक वा बेठिक ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
‘मर्निङ, इभिनिङवाक’मा मास्क लगाएर दौडिनु ठीक वा बेठिक ?
धरान (एजेन्सी: मास्क मर्निङवाक अथवा इभिनिङमा दौडिनु ठीक वा बेठिक हो ?
दौडिने व्यायाम मध्ये एक हो । दौडिदा शरीरलाई निरन्तर धेरै अक्सिजन चाहिन्छ । लामो वा छिटो दौडको लागि अक्सिजनको आवश्यकता पनि बढ्छ । मास्क लगाएर दौडदा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एन ९५ जस्तो भाल्भ्ड मास्क लगाएको भन्दा कम समयमा थकित महसुस हुन्छ । यद्यपि डाक्टरहरू र विश्व स्वास्थ्य संगठनले यदि सावधानी अपनाइयो भने कोरोनाबाट बच्न सामान्य मास्क लगाए पनि पर्याप्त हुन्छ ।
कोरोना भाइरसलाई रोकथाम गर्न डब्ल्यूएचओले केही चीजहरू प्रभावकारी भएको बताएको छ । यसमा यसलाई लगातार हातहरू सफा गर्न, मानिसबाट आवश्यक दूरी राख्ने र मास्क लगाउनु । कोरोनाको बारेमा रिपोर्टहरू पनि आएका छन भाइरस केही समयको लागि हावामा रहन्छ । त्यसकारण, मास्क लगाउने उपेक्षा गर्न सकिदैन ।
कोरोना भाइरस पहिलोपटक चीनको वुहानमा देखिएको थियो । यहाँ कोरोनाको बेलामा गरिएको लकडाउन हटाइयो । र सो बेला एकजना मास्क लगाएर एक युवक दौडन बाहिर आए र बाटोमा उनलाई सास फेर्न समस्या भयो । त्यसपछि उनी तत्कालअस्पताल पुगे । अस्पतालमा परीक्षण गर्दा उनलाई फोक्सोमा न्यूमोथोरक्स भएको पाइयो । यी युवकको उमेर २६ वर्ष मात्र थिए । ती युवालाई डक्टरहरुले बचाउन सकेनन् । युवा धेरै दुब्ला र अग्ला थिए । उनी अरू दिनहरूभन्दा त्यस दिन धेरै लामो दुरीको दौड लगाएका थिए ।
धावकहरूको दिमागमा सधै एउटा प्रश्न आउँदछ दौडिरहेका बेलामा स्वास मुखबाट लिनुपर्दछ वा नाकबाट ? यदि लामो दूरीको दौडधावक छ भने नाकबाट श्वास छोड्ने प्रयास गर्नु उत्तम हुने चिकित्सकको सल्लाह छ । किनभने यदि मुखबाट स्वास बाहिर निकाल्दा मुखबाट थुकका थोपा छोडिन्छ । यदि मास्क लगाइरहेको छ भने पनि मुखबाट स्वास फेर्दा मास्क भिजेको हुन्छ । भिजेको मास्कको साथ स्वास फेर्ने समस्या हुनेछ । लामो दूरीको दौडमा, धेरै थुक बाहिर निस्केका कारण डिहाइड्रेसनको समस्या पनि हुनसक्छ । उही समयमा हाम्रो नाक सासको लागि बनाइएको छ । हाम्रो नाकको संरचना यस्तो छ कि यसले एलर्जीको भाइरस र धुलोलाई फोक्सोमा छिर्न रोक्दछ ।
कार्डियोभस्कुलर व्यायाम गर्दा धेरै व्यक्तिहरूले भल्भ भएको मास्क लगाएको देखिन्छ । आइएचटीमा केवल शरीरलाई कम अक्सिजनमा काम गर्ने बानी बसालेको हुन्छ । तर यस समयमा शरीरमा रातो रक्त कोषहरूको उत्पादन बढ्छ । यो अभ्यास गरेर, शरीर चाँडै थकित महसुस गर्दैन र खेलाडीहरूको शारीरिक क्षमता सुधार हुन्छ । यद्यपि यो प्रशिक्षण कोच र विशेषज्ञहरूको प्रत्यक्ष नेगरानी र म्यापिंग मेशिनबाट मात्र गरिन्छ ।
लामो समयदेखि दौडमा मास्क लगाउने बानी परिसकेर आफ्नो स्वास फेर्ने बानी परिसक्नु भएकाले भने डबल लेयर मास्क वा सर्जिकल मास्क लगाउन चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् । एन ९५ जस्तो भल्भ भएका मास्कमा सास फेर्न समस्या हुन सक्छ । यस बाहेक दौडने क्षेत्र र समय उक्त स्थानमा मानिसको उपस्थिति कम हुन जरुरी छ । यो सबेरै बिहान वा बेलुका हुन सक्छ । संसारभरका मानिसहरू घरको नजिकै दौडिरहेछन् । –एजेन्सी
तपाईंले किनेको अण्डा ठीक छ कि छैन ? थाहा पाउन सकिन्छ
यसरी मात्रै सफल हुन्छ व्यापार व्यवसाय !